Kana pave nepamuviri, fetus inogamuchira oksijhini iri pasi pemari inofanirwa kuti ibudirire, saka fetal hypoxia inowedzera. Kazhinji kacho kazhinji kacho kunowedzera munguva yepininatal (kubva pamasvondo makumi maviri nemana) uye kusvika pakaberekwa mwana.
Zvinokonzera intrauterine fetal hypoxia
Zvinokonzera fetal hypoxia:
Zvirwere zveamai : zvirwere zvemwoyo, pneumonia, bronchial asthma, inxication syndrome, maitiro anotyisa amai, kubuda ropa kwakanyanya, zvirwere zveropa.
Kuita zvechisimba kwekupararira kwepasitiki: ne gestosis yehafu yechipiri yepamuviri, inopesana nekuputsika kwekuparadzirwa kwepascental, nekupererwa kweputika kusati kwasvika, umbilical cord fractures kana multiple neck neck cord embolism, ine basa risina kunaka.
Zvirwere zvekurera : kushaya mwoyo kwechechecheche, zvirwere zvechromosomal zve fetus, chirwere chehemolytic chechecheche, zvirwere zveprauterine, craniocerebral kukuvara kwechechecheche. Mushure mokuberekwa kwomwana, hypoxia yakaoma (asphyxia) inogona kukonzerwa nechishuvo che amniotic fluid mumugwagwa wekupema.
Mhando dze fetal hypoxia
Fetal hypoxia inogona kuva yakaoma uye isingaperi:
Acute fetal intrauterine hypoxia. Inowedzera mumaawa mashomanana kana kunyange maminitsi, chikonzero chacho kazhinji kacho chine nguva isati yasvika yepentecenta, uye munguva yebasa - chero kubuda ropa, uterine kuputika, mafundo kana tambo dzakawanda dzomukati. Muchiitiko ichi, pose pazvinenge zvichiita, chikamu chekudzivirirwa kwechiitiko chinokurumidza chinoshandiswa kuponesa hupenyu hwemucheche uye amai, sezvo zvinowanzoitika, kana intrauterine fetal hypoxia inokura zvakanyanya, ndiyo kufa kwake.
Inoratidzira intrauterine fetal hypoxia. Inokura zvishoma nezvishoma. Iyo fetus inogona kukwanisa kuenderana nekushaikwa kwe okisijeni, kunyange inogonawo kutungamirira kurufu rwemucheche. Asi migumisiro inowanzoitika, kana pane chisingaperi chine intrauterine fetal hypoxia, inonzi fetal development retardation syndrome (iri shure kumashure kwemasimba makuru kupfuura mavhiki maviri kubva panguva yekubata).
Zviratidzo zve fetal hypoxia
Chokutanga, amai vanogona kugadzirisa hypoxia ye fetus kuburikidza nekuderedza kana kusafambisa mwana. Chimwe chiratidzo chinogona kuteerera kune gynecologist kana chinogadzirirwa neCCTG kana ultrasound inoshandiswa muhuwandu uye rhythm yemakumbo emwoyo. Kutanga kuwanda kunopfuura 160, ipapo pasi pezana, rhythm dzimwe nguva inenge isina kururama.
Mukuwedzera kumarara ekugadzirwa, ultrasound inotsanangurwa ne:
kutenderera kana nzvimbo dzekuwedzera zvemuviri nemakumbo (kazhinji - boxer's pose, kushandiswa kunoitwa);
Nhamba yemamniotic fluid (yakarongeka koruva ndeye 35-70 mm);
mamiriro e-placenta (zvakajairika pasina pathological inclusions);
mamiriro ehutano hwekuyerera kweropa (pane doplerogram yemidziyo ye placenta).
Intrauterine fetal hypoxia - kurapa
Mishonga panguva yekudzivirira inotarisirwa kuvandudza kubuda kwemazipa ekubuda ropa, metabolism mumuviri (kurwisana acidosis) nekusimbisa kubata kwe fetus kune hypoxia. Asi kana zviratidzo zve hypoxia zvichivakwa, chirongwa chekukurumidzira kana chikamu chekudzivirira chinokurudzirwa.
Kudzivirira kweIntrauterine fetal hypoxia
Nzira dzokudzivirira amai:
zvakanyanya kuva mumhepo;
usasvuta panguva yekudzivirira;
Cherechedza kuwanda kwevanhu, kuitira kuti vasatapukirwa nehutachiona hwehutachiona;
chikafu chakakodzera chemuviri .
Basa rekudzivirira rechiremba rinotarirwa panguva yakatarwa kuongororwa uye kurapwa kwezvinetso zvekuzvitakura uye zvirwere zvaamai, kunyatsorongeka kwebasa.
Nguva ipi apo dumbu rinodonha risati rasununguka ma moles?
Zvinokwanisika here kuti vakadzi vane pamuviri vabate meno avo?
Hydronephrosis yeinso mumucheche
Amoxicillin panguva yekuzvitakura
Icho chisina kukwana uye chaiyo yezera remakore
Gorosi panguva yekuzvitakura
Zvingave zvichibvira here kuvakadzi vane pamuviri minha?
Kuberekwa kwakasimba - iko kukanganisa kwe ultrasound?
Strawberry panguva yekuzvitakura - 3 trimester
Biparietal ukuru hwe fetal head
Umbilical cord pamasvondo makumi maviri nemasere
Wakapisa placenta mukuzvitakura
Basal kutonhora 37
Vagadziri vemakambani aMariah Carey vanoda kubva kwaari mamiriyoni matatu emadhora
Mhemberero dzechato munguva yedu
Capelin ane mbatata
Mazano eimba yekugara
Murume anochinja, asi haasiye-mazano echipfungwa chepfungwa
Ndinoda visa ye Jamaica here?
Chii chinoshandiswa eyelashes, uye nzira yacho inogadzirwa sei?
Chii chaunogona kupedza pahutano hwekuberekwa?
Salad kubva kumucheka wakachena
Gnome wekunzwa - chikafu chepano nemaoko ako
Mhinduro yevanhu yeikiti kumbwa
Mabhomba ekushambidza nemaoko avo